तपाईंको यो साता कस्तो रहला ? जान्नको लागि साप्ताहिक राशिफल पढ्नुहोस् ! - Bulbul Samachar
bulbul मंगलबार, भदौ ८ गते 163 views
(भाद्र ८ गतेदेखि १४ गतेसम्मको राशिफल)
मेषः ब्यवसायमा लाभ हुनेछ । आयमा वृद्धि हुनेछ । यात्राका अवसरहरु प्राप्त हुनेछन् । मित्रबाट सहयोग पनि मिल्नेछ । मीठो खान पाइनेछ । साताको मध्यतिर भने आर्थिक समस्या बढ्ने हुनाले सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
वृषः आफन्तहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ । मनमा धेरै कुरा खेल्न सक्नेछन् । प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ । मित्र तथा आफन्तको सहयोगका कारण अधुरा कामहरु सफल हुनेछन् । साताको अन्त्यतिर भने अनावस्यक यात्रा गर्नुपर्नेछ ।
मिथुनः मीठो खान पाइनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्नेछ । धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । कुरा काट्नेले ठाउँ पाउने छन् । यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ । शुभ खबर प्राप्त हुनेछ । मन प्रसन्न रहनेछ । तपाईको यो साता शुभ रहनेछ ।
कर्कटः ब्यापारमा लाभ मिल्नेछ भने नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । छोटो दुरीको यात्राको अवसर मिल्नेछ । अधुरा कामहरु पूरा हुनेछन् भने मन प्रसन्न रहनेछ । मित्र भेटले उत्साह बढ्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । साताको शुरुतिर भने स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ ।
सिंहः बोलिको प्रभाव बढ्नेछ । शुभ खबरहरु प्राप्त हुनेछन् । यात्रामा निस्कनुपर्नेछ । आम्दानी बढेर जानेछ । गरेका कार्यमा सफलता मिल्नेछ । प्रेम प्रसंग चल्नेछ भने साताको मध्यतिर भने अनावस्यक यात्रा गर्नुपर्नेछ ।
कन्याः यात्राको अवसर मिल्नेछ भने मित्रहरुको सहयोग बढ्नेछ । ब्यापारमा लाभ मिल्नेछ । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । मान्यहरुसँग भेटघाटको अवसर मिल्नेछ । आयमा वृद्धि हुनेछ । साताको अन्त्यतिर भने आफन्तहरुबाट समस्या हुनेछ ।
तुलाः पुरानो धन फिर्ता आउनेछ । कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै अधुरा कार्यहरु पूरा हुनेछन् । पारिवारिक सहयोगले मिल्ने देखिन्छ । भेटघाटको अवसर मिल्नेछ । मन प्रसन्न रहनेछ भने साताको अन्त्यतिर भने आर्थिक समस्या आउनेछ ।
वृश्चिकः विपरित लिङ्गी तथा मान्यजनबाट पूणर् सहयोग मिल्नेछ । मनोरञ्जनको अवसर मिल्नेछ । ब्यापारमा लाभ मिल्नेछ भने नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । मीठो खान पाइनेछ । साताको शुरुतिर भने शत्रुहरुको उदय हुनेछ ।
धनुः प्रेम प्रसङ्ग चल्नुका साथै पारिवारिक सुख बढ्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा मन जानेछ । मान्यजनहरुको भेट र सहयोगले मनमा उत्साह बढ्नेछ । शुभ खबर प्राप्त हुनेछ । यात्रामा निस्कनुपर्नेछ । साताको मध्यतिर भने आर्थिक समस्या बढ्ने हुँदा सतर्क रहनुहोला ।
मकरः मान्यजनहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । मीठो भोजनको अवसर मिल्नेछ । धार्मिक कार्यमा मन जानेछ । बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ । पुराना साथीहरुको सहयोग बढ्नेछ । आयमा वृद्धि हुनेछ । साताको मध्यतिरका दिनहरुमा भने ब्यर्थै विवादको सामना गर्नुपर्नेछ ।
कुम्भः रोजगारीका अवसरहरु मिल्नेछन् । शुभ खबर प्राप्त हुनुका साथै मन प्रसन्न हुनेछ । शुभ खबर पाइनेछ । कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मित्रहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । मनोरञ्जनको अवसर प्राप्त हुनेछ । साताको मध्यतिर भने कार्यमा विलम्ब हुनुका साथै खर्च बढ्नेछ ।
मीनः प्रेम प्रसङ्गले मन हर्षित रहला । छोटो दुरीको यात्राको अवसर मिल्नेछ । ब्यापारमा लाभ हुनेछ । मित्रहरुको सहयोगले कामहरु बन्नेछन् । ब्यापार तथा जागीरमा लाभ हुनेछ । साताको शुरुतिर भने विवादको सामना गर्नुपर्नेछ ।
८ गते मङ्गलबार, रोपाईं जात्रा
१० गते बिहिबार
(उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ)
११ गते शुक्रबार, विरुढा पञ्चमी
१३ गते आइतबार, विश्व आणविक दिवस
१४ गते सोमबार, कृष्णजन्माष्टमी, गौरापर्व
एक व्यक्तिको शव फेला : शंकास्पद ३ जना पक्राउ !